Free Website and Digital Marketing - Cellapp | Helping Businesses Grow
EMI मा ecommerce
फ्री Business परामर्श
पोस्ट कोविड Revival Plan
फ्री वेबसाईट तथा डिजिटल मर्केटिङ
Go to Cellapp Global Website
न्युनतम मूल्यमा वेबसाईट बनाउनुहोस् अथवा मोबाईल एप बनाउदा वेबसाईट FREE मा पाउनुहोस् ।
कोरोना र लक्डाउनले Business मा पारेको नराम्रो असरलाई कम गर्दै उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन र सहयोग गर्ने हेतुले हामी न्युनतम लगानीमा मोबाईल एप्स तथा वेबसाईट प्रदान गरिरहेका छौ।
अब तपाईंले आफ्नो Business को लागि मोबाईल एप बनाउदा वेबसाईट FREE मा पाउन सक्नुहुन्छ।
यदि मोबाईल एप चाहनु हुँदैन भने वेबसाईट पनि न्युनतम मूल्यमा बनाउन सक्नुहुन्छ।
अझै eCommerce बनाउनुहुन्छ भने हामीसँग EMI मा पनि Business को लागि eCommerce वेबसाईट plan हरु उपलब्ध छ।
सोध्पुछ / बूकिङ
EMI मा eCommerce Plan हेर्नुहोस्
Social Media मार्केटिङ
हजुरको Business लाई अब FaceBook, Instagram, YouTube जस्ता Social मिडिया Platform मा प्रचार गर्नुहोस्। विभिन्न किसिमको Business लाई उपयुक्त Platform को सुझाव हामी दिन्छौ र व्यापारमा वृद्धि गराउन सहयोग गर्छौ।
SEO / ईमेल मार्केटिङ
आफ्नो वेबसाईटलाई गूगलमा सर्च गरिएका परिणामहरु मध्य टपमा ल्याउनुहोस् र ईमेल मार्फत आफ्नो Clients / सम्भावित Clients हरुसँग सधैं सम्पर्कमा रहनुहोस्।
आफुलाई सुहाउँदो सेवा तल दिएको फारममा पठाउनुहोस्। हामी छिट्टै सम्पर्क गर्नेछौ।
हजुरको नाम (required)
Business को प्रकार
चहिएको सेवा छनोट गर्नुहोस्।
मोबाईल एप्स र फ्री वेबसाईट वेबसाईट डिजिटल मार्केटिङ सेवा
हामी विगत ११ वर्षदेखी देश-विदेशमा आफ्ना उत्कृष्ट प्रोडक्ट र सेवाहरुको छाप छोड्दै आएका छौ। यसपालि नेपालका उद्यमीहरुलाई विशेष सहयोग गर्नका लागि हामीले आफ्ना प्रभावकारी योजनाहरु परिमार्जन गरी ल्याएका छौं। यी योजनाहरु जेठ २०७८ सम्म विशेष छुट र न्युनतम मुल्यमा उपलब्ध छ। यसको अवश्य फाईदा उठाउनुहोला।
पहिलो नाम *
हाम्रो मुख्य सेवाहरु
कोविड Revival योजनाहरु
Cellapp Global Site
सोम - शुक्र बिहान ९- साझ ६
प्रतिलिपि अधिकार © 2021 Cellapp, सबै अधिकार सुरक्षित. Go to Cellapp Global Website
आफ्नो Pharmacy को लागि सिस्टम यहाँ बुक गर्नुहोस्।
Pharmacy को नाम
आफ्नो Shopping mall को लागि सिस्टम यहाँ बुक गर्नुहोस्।
Shopping Mall को नाम
आफ्नो पसलको लागि सिस्टम यहाँ बुक गर्नुहोस्।
आफ्नो Travel Agency को लागि सिस्टम यहाँ बुक गर्नुहोस्।
Travel Agency को नाम
आफ्नो होटेलको लागि सिस्टम यहाँ बुक गर्नुहोस्।
आफ्नो किरानाको लागि सिस्टम यहाँ बुक गर्नुहोस्।
आफ्नो विद्यालयको लागि सिस्टम यहाँ बुक गर्नुहोस्।
आफ्नो कर्पोरेट/कम्पनीको लागि सिस्टम यहाँ बुक गर्नुहोस्।
आफ्नो रेस्टुराँको लागि सिस्टम यहाँ बुक गर्नुहोस्।
EMI eCommerce को लागि यहाँ inquiry गर्नुहोस्।
कसरी भुक्तानी गर्न चाहनुहुन्छ?
क्यास क्रेडिट कार्ड EMI
Kirana को लागि यहाँ inquiry गर्नुहोस्।